बेनीमा नयाँ विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन, हामीले पनि केही सिक्ने की ? | Samacharpati बेनीमा नयाँ विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन, हामीले पनि केही सिक्ने की ? – Samacharpati
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा नयाँ विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन हुन थालेको छ ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा पर्ने बेनी बजारका घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै भाँडोमा सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ विधि अपनाइएको बताउनुभयो ।नगरपालिकाका कर्मचारी कृष्ण शाक्यले ‘कम्प्याक्टर’ र ट्र्याक्टरले आलोपालो गरेर कुहिने र नकुहिने फोहोर घरघरमै पुगेर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । “कुहिने फोहोरलाई मल बनाउने र नकुहिनेलाई कवाडीमा बिक्री गर्ने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फोहोर व्यवस्थापन शुल्क तिरेका घरधनीले मात्र डस्टबिन पाउनेछन् ।”
नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत रु १३ लाख ७६ हजारमा खरिद गरेको डस्टबिन घरधनीलाई आइतबारदेखि वितरण शुरु गरिएको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठले वडा नम्बर ७ को वीरेन्द्रचोक टोल सुधार समितिअन्तर्गतका घरधनीलाई डस्टबिन उपलब्ध गराएर वितरण कार्यको शुरुआत गर्नुभएको थियो ।
घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाएर सङ्कलन गरिँदा केन्द्रमा लगेपछि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताइएको छ । यसअघि कुहिने र नकुहिने सबै फोहोरसँगै सङ्कलन गर्दा व्यवस्थापन गर्न असहज भएको थियो । बेनी बजारमा गरिएको अभ्यास सफल भएपछि गलेश्वर र तातोपानी बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पनि यस्तै विधि अपनाउने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकी र सडकमा आवतजावत गर्नेलाई असर नपर्ने तथा दुर्गन्ध नआउने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउन नसक्दा प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन् । कुहिने फोहोरलाई दुर्गन्ध आउन नदिने प्रविधिको प्रयोग गरी मल बनाएर बिक्री गरी आम्दानी गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । बेनी र गलेश्वर बजारबाट दैनिक तीन ट्र्याक्टरभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ ।
पल शाह बर्षा रावत अभिनित म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
शीतलनगर टोल १४ को अध्यक्षमा भरतराज, आमा समूहमा गंगा शर्मा चयन